Tomato Sauce Machine Vagadziri & Vatengesi - China Tomato Sauce Machine Machine
Pasita muchina uye Spaghetti michina
French fries michina
Muchina weswitsi nyoro
Zvigadzirwa zvehove zvemumagaba
Kuzvigadzira kwakachena doro michina
Zvishoma zvigadzirwa zve yoghurt
Zvibereko nemiriwo kuomesa uye kurongedza yakazara mutsara
Zvomumagaba chikafu muchina uye Jam yekugadzira michina
Yakachena mvura prodution muchina
Carbonated chinwiwa uye soda chinwiwa prodution muchina
Chinwiwa michina uye yekugadzira mutsara
Apple, peya, mazambiringa, pomegranate kugadzira muchina a ...
Bhabheri, bheribheri, mulberry, sitirobheri, raspber ...
Mango, chinanazi, papaya, guava kugadzira muchina ...
Navel orenji, machungwa, grapefruit, mandimu kugadzira m ...
Tomato paste, chili muto kugadzira muchina uye pro ...
Nyanya nyanya, chili sosi kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara
JUMP MACHINERY (SHANGHAI) LIMITED ndiye wekutanga mutengesi weChinese we turnkey akazara matomatisi ekugadzira mutsara. Kuburikidza nekubatana pamwe nekutaurirana neItari neGerman FBR / Rossi / FMC uye makambani mazhinji, achibatanidza hunhu hwevamwe vekunze.
Navel orenji, machungwa, grapefruit, mandimu inogadzira muchina uye yekugadzira mutsara
Navel orange, citrus, grapefruit, ndimu dzakateedzana mitsara yekugadzira inonyanya kusanganisira pre-yekurapa michina, iyo yakanyanya yepamusoro michina yejusi muChina, orenji muto midziyo yevasungwa, asteurization uye UHT chubhu yekuzadza uye yakakosha emafuta ekudzora michina nezvimwe.
Bhurubheri, bheribheri, mulberry, sitirobheri, rasipiberi, tsvuku bayberry, cranberry kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara
Bluebheri, bheribheri, mulberry, sitirobheri, rasipiberi, tsvuku bayberry, cranberry kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara inogona kuburitsa yakajeka muto, turbid muto, muto we concentrate, muchero upfu, michero jamu uye zvimwe zvigadzirwa.
Apple, peya, mazambiringa, pomegranate kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara
Apple, peya, mazambiringa, pomegranate inogadzira muchina uye yekugadzira mutsara wepakeji: girazi bhodhoro, PET bhodhoro repurasitiki, zip-kumusoro inogona, aseptic nyoro package, zvidhinha katoni, gable yepamusoro katoni, 2L-220L aseptic bhegi mune dhiramu, katoni pasuru, bhegi repurasitiki , 70-4500g gaba rinogona.
Olive, plum, bayberry, peach, apricot, plum kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara
Olive, plum, bayberry, pichisi, apurikoti, puramu inogadzira muchina uye yekugadzira mutsara package: girazi bhodhoro, PET bhodhoro repurasitiki, zip-yepamusoro gaba, aseptic nyoro package, zvidhinha katoni, gable pamusoro katoni, 2L-220L aseptic bhegi mune dhiramu, katoni pasuru, bhegi repurasitiki, 70-4500g gaba rinogona.
Mango, chinanazi, papaya, guava kugadzira muchina uye yekugadzira mutsara
Mango, chinanazi, papaya, guava inogadzira muchina uye yekugadzira mutsara inokodzera kugadzirisa michero yetropiki senge mango, chinanazi, papaya, guava zvichingodaro.